Nkọwa gbasara Sapanca Ropeway Project nke Na-akpata Mmeghachi Mmekọ | RayHaber | raillynews
HomeTurkeyMpaghara Marmara54 SakaryaNkọwa niile gbasara Sapanca Cable Car Project
10 / 12 / 2019 54 Sakarya, General, Gondola, Isi akụkọ, Mpaghara Marmara, Turkey, TELPHER
Nkọwa niile gbasara ọrụ ụgbọ ala nke Sapanca
Projectzọ ụdọ a ga-arụ ọrụ na mpaghara Sapanca na-abịa n'usoro a na mmeghachi omume maka ọrụ. Keduzi ihe bụ sapanca ropeway project na-ebute mmeghachi omume?
Site na Kırkpınar na mpaghara Sapanca, 1,5 ga-erute Mahmudiye na njedebe nke larịị.
Kedụ ka esiri ụgbọ ala Sapanca wee ruo ụbọchị ndị a? Ndị a bụ nkọwa niile gbasara oge gara aga na ugbu a nke oru ropeway, nke bụ ọ dị oke mkpa na mpaghara Sapanca njem site na afọ mbụ nke ọrụ ahụ, 2018.
Cargbọ ala USB, nke ga-amalite site na Kırkpınar, otu n'ime ebe ndị njem nlegharị anya kachasị mkpa dị na Sapanca, toro ogologo nke 1,5 kilomita ma ekwuputala na ọ bụ naanị osisi ndị kwekọrọ na ebe a ga-ebipụ ebe ụgbọ ala USB ga-ebi. Agbanyeghị, ọnụ ọgụgụ nke osisi ndị a na oru ngo ahụ dị ka akọwara na ọha na eze abụghị puku 3 kwuru. Dika oru a si di, a gha enyere uzo ahu aka iru n’elu osisi n’enweghi nsogbu nke osisi di ugbua. Mita 700 ga adi iche n’agbata uzo mbu na uzo mbu, ma g’eweputa nlele nke Sapanca nke oma mgbe oburu Mahmudiye. Ọnọdụ Mahmudiye Incebel, nke ga-ejedebe eriri ụgbọ ala USB a ga-ewu na mkpokọta ụlọ ọrụ nke ọnụ ọgụgụ ọhịa 72 kwupụtara ga-agwụcha site na ibelata ọdụ ọdụ ahụ.
ATV, BUNGALOW NA ATBOURR N NATHARA
Mlọ ọrụ Mahmudiye nke ọrụ ụgbọ ala USB ga-abụ oriri nkịtị. Ndị njem nleta obodo na ndị si mba ọzọ ga-eji ụgbọ ala KNNXX gbagoro na Kırkpınar ga-anụ ụtọ okike site na cafes, ụlọ nri, ebe ije ije, ebe a na-ere ije, ebe a na-egwu ndị ntorobịa na ndị agadi nọ na Mahmudiye. A ga-agbasa mpaghara ahụ mpaghara 1,5 acre, ọ ga-enwekwa oge ntụrụndụ na ATV na ọrụ egwuregwu dị iche iche. A ga-enwekwa ụlọ ga-agba agba maka ebe obibi na mpaghara ahụ, yabụ ọrụ ụgbọ ala USB ga-enye ọmarịcha njem maka okike dị na mpaghara ahụ.
Ọ B IR I INWE INWE NRI INWETA
Ihe omuma kachasi mkpa nke oru ngo a bu na o kwekorita na okike, ihe megidere ihe ndi mmadu mara. Sapanca, nke n’enyeghi aka iwughachi ulo oru, ga-aru oru n’ime ihe okike ndi mmadu, n’uche inye nchedo nke oma karie nke uwa.
Ọ ga-emebi okike?
N'ime oru ngo a, a ga-eweghachi osisi ndị ọzọ na mpaghara ahụ. Ihe oru ngo a bu n’obi kpuchido ihe ịtụnanya eke a mgbe ị na-ahụ ọdịdị pụrụ iche nke Sapanca maka ndị njem nleta ụlọ na mba ọzọ. Mee oru ngo a ka a ga-eji dobe mmemme a na usoro ihe omume 25 mgbe emesiri ga-adịgide na Obodo Sapanca.
OGBONA CHAIRMAN AKUKO EGO
Aydın Yılmazer, Sapanca Mayor nke oge na-akwadebe ọrụ ahụ, kwuru na ha na-atụle uche nke mpaghara mmejuputa iwu a mgbe ha na-akwadebe ọrụ ahụ wee kwuo ihe ndị a banyere ọrụ ahụ.
Uz Anyị na-akpachapụ anya ịhụ na anụ ahụ dị ugbu a anaghị emebi. Enweghị ihe ndị metụtara ahụike mmadụ n'oge ọrụ ahụ. Ebe ọ bụ na ndị na-eme ka ọkụ eletrik dị na ọkụ eletrik, ha agaghị emepụta mmetụta na-adịghị mma na gburugburu ebe obibi. N'ime nkwekọrịta anyị na ụlọ ọrụ na-emeri, anyị na-etinye ihe eji eme ihe maka nkwanye ugwu maka gburugburu. N’aka ozo, nkọwa nile m kwuru n’okpuru n’ime nkwekọrịta a. Dịka gọọmentị ime obodo, anyị nwere obi ụtọ iweta Sapanca n'ọrụ ngo ụzọ ahụ, nke ga-abụ nke mbụ n'obodo anyị, ebe anyị na-atụle nkọwa niile. "
G WN W ga-echekwa na SAPANCA?
N'ihi ụgbọ ala USB a ga-ewu, ahịa a ga-abawanye na ndị njem obodo na ndị si mba ọzọ na-abịa site n'aka ndị ahịa nọ na mpaghara Kırkpınar ebe ọdụ ụgbọ oloko dị. Site oge ha na-abanye na nke ugbu a na-abata ndị njem nleta kpakpando hotels ha na-ahụ na hotels niile mkpa, na laghachi ndị na-azụ ndị na-ere mpụga trades, ma cable ụgbọ ala oru ngo na ọbịa maka Sapanca ga-ahịa bụ haşırneş pụta nke hotel ihe ọzọ nke ihe anụ ụlọ-ịkpata net n'akụkụ m na-enweghị ọrụ mere n'ihi na e nweghị adabara nnọọ oké njọ N'echiche, ọ ga-emepụta ọrụ.
G MUN MU mere njegharị ga-eji chekwaa SAPANCAYA?
Mgbe oru a zuru oke, ikike njem nlegharị anya nke Sapanca na-eme atụmatụ ịbawanye site na oge 2 ma ọ bụ 3. Sapanca ga-aghọ mpaghara na-enweghị oge anwụ na mpaghara njem.
ỌR RE EGO
Ihe oru a bidoro inyefe ndu a, karia mgbe nguzogide nke ndi Kırkpınar gosiputara nnukwu nguzogide n’ime oru a. (Medyab bụ)
Ozi a na ewepuru Alanya na High Speed ​​Train Project na-emeghachi omume…
Ụgbọ njem dị na Bursa kpatara mmeghachi omume
A ga-eji ya mee ihe na YHT, mechie ihe kpatara ya
Ịgba ụra na njem na Bursa kpatara mmeghachi omume
The Project of the Century Special Details from the Marmaray (Video)
3. akụkọ EIA ụgbọ elu nwere nkọwa dị mma
Nkọwa banyere Yavuz Sultan Selim Bridge
Ihe mere ụzọ YHT ji mee Doğançay-Sapanca gbanwere
KARDEMİR nwere ike ịmepụta okporo ụzọ niile nke TCDD chọrọ
2 Afọ 3 Ọnwa Mkpọrọ
Mgbe ọpụpụ nke Alsancak, mgbidi nke TCDD, nke na-eme ka ọ daba n'otu ụzọ, na-ada mbà
Nkeji nke mere kpatara mberede ahụ
K projectrkpınar USB project project
Cablegbọ ala USB Sapanca